Nimankii ku caan baxay bililiqada Koonfurta Soomaaliya oo dumarka tafahooda baaran jiray, ayaa hadda iyaga kaalmo ka helaya maamulka Hargaysa ka jira, waxay bilaabeen inay reer guuraagii Buurha Calmadow ka biliqaystaan raashinka ay haystaan ama midkii safarka ahaa oo u socday degaanadaas oo ay Awrtu wadeen .
Maamulka Puntland oo dagaal kula jiray kooxdan , ayaa ilaa hadda marna warbaahinta ka sheegin cidda hogaamisa Mooryaantan Caruurta raasinkeeda tuurta ku qaadanaysa.
2017 Bililiqada buurta Calmadow
Taasina waxay keentay in dadkii deganka iyo maamulkii Puntland ay wada shaqayn yeelan waayaan
Hadaan tusaale u soo qaadano, waxa laga yaabaa inuu jiro nin degaanka u dhashay, oo dadka degaanku u haystaan inuu yahay mid iyaga ka mid ah, hase ahaatee la shaqeeya ama ka tirsan Dadqalatooyinka. Taasi ma dhacdeen haddii maamulka Puntlad uu bulshada degaanka ama guud ahaan Shacabka Puntland ka wacyi gelin lahaa Hogaamiyaasha Kooxdan, beelaha ay ka soo jeedaan iyo dadka ay yihiin. Bulshadu waa soo sheegi lahaayeen ninka dhibta ku haya iyo ninka la saaxiibka ah. Ganacsata taageerta kooxdan oo maanta sida xor ah u joogta Gobolada Puntland cabsi ayaa geli lahayd oo taageeradoodu waa yaraan lahayd. Jidadaka dhaadheer oo loo soo maro Buurta Calmadow ma noqdeen sida ay maanta yihiin ee Bahalo mareenka.
Ugu danbayntii maamulka Puntland oo koodan kula dagaalamayey Buurta calmadow, ku dhowaad tobon sano, maanta waa hayaan sawir dhamaystiran oo uu ka heleen sirdoonkooda iyo dadka laga soo qabta kooxahan. Sidaas awgeed waa in uu soo bandhigaa magacyada Hogaamiyaasha kooxdan, beelaha ay ka soo jeedaan iyo dadka ugu badan oo ay ka helaan taageerada
← Guddiga Tiro koobka shaqaalaha rayidk ah ee dawladda Puntland gaarey gobollada Sanaag iyo Highland Wafdi ka socda dawladda Puntland oo booqday mashruuca PL ee Deegaanka Galgala ee Gobalka Bari →